डिसेम्बर २०१ - - नेटवर्क रेडियो
घर / 2017 / डिसेम्बर
प्रकाशित डिसेम्बर 30, 2017
Inrico TM-7 एक मोबाइल APRS स्टेशन को रूप मा
केवल कुनै पनि APRS अनुप्रयोग स्थापना गर्नुहोस् जस्तै APRSDroid र तपाइँसँग एक राम्रो APRS मोबाइल स्टेशन छ, तपाइँको स्थानको रिपोर्ट सबै समयमा। को Inrico TM-7 कुनै श doubt्का बिना, सबैभन्दा बहुमुखी नेटवर्क रेडियो हो!
फेसबुक समूहबाट कार्ल होब्सनले चित्रण नेटवर्क रेडियो.
प्रकाशित डिसेम्बर 28, 2017
२०१ favorite बाट मेरो मनपर्ने नेटवर्क रेडियो
मैले धेरै नेटवर्क रेडियोहरू प्रयास गरें। अहिले सम्म Inrico TM-7 र टकपड N58 मेरो शीर्ष विकल्प हो! मलाई भावना छ कि २०१ in मा, नेटवर्क रेडियो एमेच्योर रेडियोको ठूलो hype हुनेछ! र तपाइँ कुन मनपर्दो छ?
यो Inrico TM-7 यसको नवीन मोबाइल अवधारणाको लागि जीत। एक सरल लगभग स्पष्ट अवधारणा जुन एक विचारको नर्क हो! बलियो र राम्रो डिजाइन गरीएको। मैले बधाई दिनु पर्छ इन्रिको तिनीहरूको प्रेरणाको लागि!
यो टकपड N58 बर्षको अन्तिम दिनहरु मा जारी गरिएको थियो र म पहिले नै 100% विश्वस्त छु। पहिलो, यसको आधुनिक डिजाइन छ। दोस्रो, अडियो गुणले केहि Yaesu वा Icom लगभग अप्ठ्यारो महसुस गर्दछ। मलाई शंका छ कि यदि मोटोरोला यो टकपड भन्दा राम्रो लाग्नेछ। दिमागमा राख्नुहोस् कि यी रेडियोहरूले पेशेवर बजारलाई लक्षित गरिरहेका छन्। विवरणहरू, डिजाइन, सबै कुरा प्रभावशाली विवरण र उच्च गुणस्तरका सामग्रीहरूले निर्माण गरिएको छ। यो त्यहाँ सस्तो रेडियो छैन, तर यो प्रत्येक एक प्रतिशतको लायक छ!
म यो नयाँ अवधारणाको साथ साँच्चिकै उत्साहित छु र मबाट तपाईले सँधै मेरो जागिर र मेरो प्रतिबद्धता र सर्वश्रेष्ठ प्रयासको लागि मेरो उत्कृष्ट अनुमोदनको आशा गर्न सक्नुहुन्छ। यस अद्भुत वर्षको साथ तपाईंको सबै विश्वासको लागि धन्यवाद!
म तपाईलाई नयाँ सालको शुभकामना दिईरहेछु स्वास्थ्य, प्रेम र केहि पैसाको साथ some केहि रेडियोहरू किन्न 🙂
De 73 डी CT1EIZ
प्रकाशित डिसेम्बर 28, 2017 डिसेम्बर 28, 2017
टकपड N58। यसलाई कहिँ पनि लैजानुहोस्।
नयाँ टकपोड N58 भर्खरै घोषित भएको छ र यो पहिले नै सफलताको कहानी हो। आजबाट तपाईको एकाईलाई अर्डर गर्नुहोस् नेटवर्क-radios.com or megahertz.shop - केवल यहाँ तपाईं एक पूर्ण अनलक Android प्रणाली प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, अनुकूलित ROM सहित ह्याम अनुप्रयोगहरूको लागि तयार, जस्तै Echolink, TeamSpeak 3, Zello, आदि।
प्रकाशित डिसेम्बर 27, 2017 डिसेम्बर 27, 2017
एमेच्योर रेडियो, असंगठित
प्रकाशित डिसेम्बर 26, 2017 जनवरी 23, 2018
कुराकानी N58 परीक्षण एकाई स्थापना गर्दै
आज, मैले मेरो प्राप्त गरें टकपड N58 परीक्षण एकाई। यसमा मेरा हातहरू लिन र रेडियोको अन्वेषण गर्न म उत्साहित भएँ।
टकपोडको मेरो टोलीले मलाई यो पठाउँनु अघि भर्खरै द्रुत परीक्षण गर्यो र भाषा परिवर्तन गर्न बिर्सिए, त्यसैले मैले रेडियो चिनियाँ भाषामा पाएँ।
म चिनियाँ बुझ्दिन, मलाई अंग्रेजी को लागी सेटिंग्स परिवर्तन गर्न सही मेनू फेला पार्न गाह्रो भयो। यद्यपि मैले कारखाना रिसेट गर्न सजिलो पाएँ, जुन मैले गरेको थिएँ।
समस्या सुरु भयो। (मैले उनीहरूलाई आशा गरिरहेको थिएँ - यो परिक्षण एकाई हो)
उपकरण GSM अपरेटरमा दर्ता गर्न सकेन। म तिनीहरूलाई खोज्न सक्दछु, अपरेटरहरूको सूची देख्न सक्दछु, तर केवल दर्ता गर्न सकेन, त्यसैले यो रेडियो मोड्युलको साथ कुनै समस्या थिएन। सिम कार्ड स्लटमा राम्रोसँग घुसाइएको थियो र अपरेटि। प्रणालीले पहिचान गर्यो। म भर्खरै दर्ता गर्न सकेन। मसँग IMEI जाँच गर्ने विचार थियो। केवल डायल गर्नुहोस् * # 06 # र BANG! “अज्ञात आईएमईआई“। मेरो फ्याक्ट्री रिसेटले अलि अलि धेरै मेटायो, मलाई लाग्छ।
मसँग मेरो सक्कली IMEI को हार्ड प्रतिलिपि नभएको कारण मैले भर्खरको मेरो पुरानो फोनको IMEI को साथ उपकरण अपडेट गर्ने निर्णय गरें, अब प्रयोगमा छैन। तपाईले नयाँ आईएमइआई पनि उत्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ यो वेबसाइट। यहाँ प्रक्रिया छ (कुनै पनि एन्ड्रोइड उपकरणका लागि मान्य):
२ डायल * # * # 3646633 # * # * (यसले सेवा मेनू प्रविष्ट गर्दछ)
२. अब क्लिक गर्नुहोस् "कनेक्टिभिटी"।
Now. अब "CDS जानकारी"र त्यसपछि यसमा क्लिक गर्नुहोस्।
Then. त्यसपछि, चेकआउटको लागि "रेडियो जानकारी"
On. क्लिक गर्नुहोस्फोन 1"।
Follows. निम्न अनुसार IMEI प्रविष्ट गर्नुहोस्: AT + EGMR = 1,7, "YOUR_IMEI"
नोट १: YOUR_IMEI लाई तपाईंको वास्तविक IMEI द्वारा बदल्नुहोस्
नोट २: AT र "+" बिच ठाउँ हुनुपर्दछ र IMEI उद्धरणको बिच हुनुपर्दछ।
नोट:: यदि तपाईंसँग डुअल सिम उपकरण छ र तपाईं IMEI # २ परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ भने आदेश यो हो: AT + EGMR = 1,10, "YOUR_IMEI"
एक पटक कमाण्ड पठाइएपछि, म रेडियो रिबुट गरे। (टकपडको मामलामा, ब्याट्री हटाएर)
एकचोटि रेडियो बुट भएपछि, मैले प्रत्येक १ सेकेन्डमा निम्न त्रुटि सन्देश पाउँदछु: "दुर्भाग्यवस प्रक्रिया com.android. iPhone बन्द भयो"। यसलाई रोक्नको लागि, हामीले फोन अनुप्रयोगको क्यास खाली गर्नु पर्छ।
त्यो गर्नको लागि, म जानु पर्ने थियो सेटिंग्स / अनुप्रयोगहरू / सबै / फोन / डाटा खाली गर्नुहोस् र अन्तमा जानुहोस् सेटिंग्स / मिति र स्वचालित क्षेत्र असक्षम गर्नुहोस्.
र अर्को रिबुट। (ब्याट्री हटाउनुहोस्)
बुट पछि, म जाँच गर्न सक्दछु कि मेरो IMEI सक्रिय छ, र मान्य छ, र रेडियो तुरून्त नेटवर्कमा दर्ता भयो।
त्यसो भए, मैले मेरो गुगल खाता थप्न प्रयास गरें ताकि म टीम स्पिक 3, जेल्लो र अन्य सबै अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्न सक्दछु।
म सक्दिन जहिले पनि मैले मेरो खाता थप्न खोजें, मैले सन्देश पठाएँ कि गुगल सेवाहरूमा जडान गर्नमा समस्या आएको छ। मैले इम्बेडेड ब्राउजर प्रयास गरें र वेब सर्फ गर्न सकें, त्यसैले इन्टरनेट जडानको साथ समस्या भएन। मैले Google Play को पछिल्लो संस्करण सिधै इन्स्टल गरें यहाँ.
र अन्तमा, सबै महान काम गर्दैछ! परीक्षण इकाइहरूसँग खेल्नु राम्रो हो, किनकि तपाईं तिनीहरूको हातहरू पहिले तिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नुहुन्छ, तर कहिलेकाँही तपाईंले तिनीहरूलाई थप मनपर्दो काम गर्नको लागि थप काम पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। ठिक छ, कसैले फोहोर काम गर्नुपर्दछ, त्यसैले ग्राहकहरूले बाकसको ठीक बाहिर एक सहज अपरेशन पाउनेछन् ... धेरै जसो केसहरूमा! 🙂
प्रकाशित डिसेम्बर 26, 2017 डिसेम्बर 26, 2017
कुराकानी N58 अनबक्सिing र समीक्षा
म यो नयाँ नेटवर्क रेडियोसँग साँच्चिकै उत्साहित छु। टकपड N58
म चर्को साथ चकित छु, वास्तवमा यसको मतलब हो, LOOOOUD र यसको लाउडस्पीकरको स्पष्ट अडियो। IRN र Zello प्रेमीहरु को लागी, यो सम्भवत सबैभन्दा अचम्मको नेटवर्क रेडियो हो। यसले 3G जी वा वाइफाइ जडान प्रयोग गर्दछ, प्रोसेसर पर्याप्त छिटो छ, र यो तपाईंको हातमा उत्तम फिट हुन्छ। योसँग केवल सहि आकार, सही तौल छ र म यो भन्न सक्दिन कि यो कति सुन्दर छ।
म आशा गर्दछु कि तपाईंले तलको भिडियोको आनन्द लिनुभयो।
यदि तपाईं केहि लुकेका सुविधाहरूमा जान चाहानुहुन्छ भने यो जाँच गर्नुहोस् लेख.
प्रकाशित डिसेम्बर 26, 2017 मार्च 10, 2018
RT4 पछिल्लो कारखाना फर्मवेयर
यहाँ को लागी पछिल्लो कारखाना फर्मवेयर छ रेडियो टोन RT4। यसले समस्या ब्याट्री अवधि गणनाको साथ समाधान गर्दछ।
सावधानी: RT4 ले अपग्रेड पछि पुन: सुरु हुन केहि मिनेट लिन सक्दछ।
फर्मवेयर डाउनलोड गर्नुहोस् यहाँ.
प्रकाशित डिसेम्बर 24, 2017 डिसेम्बर 29, 2017
Inrico TM-7 सकेट पिनआउट (माइक) OK8NWO द्वारा
Inrico TM-7 Ok8NWO द्वारा सकेट पिनआउट (माइक)
जब म ड्राइभ गर्दछु तर घुमाउरो केबल मनपर्दैन, मैले कन्डनसर माइकको साथ नेतृत्व गर्ने प्रयास गर्ने निर्णय गरें जुन म स्थितिमा छोड्न सक्थें।
मैले tx स्विच थपें ​​तर वास्तवमै मैले btooth tx बटन प्रयोग गर्दा यसको आवश्यक पर्दैन तर मैले जे होस् यसलाई तार गरें।
पिनआउट्स १ Gnd २ अडियो 1 Tx मा
यी कम्तिमा Zello मा काम।
Maby तपाईंसँग पहिले नै पिनआउट छ तर कारको लागि मेरो ह्याचेट केबल यहाँ छ। मैले ईथरनेट तार प्रयोग गरें जुन म स्कीयरिंग र्याक / स्तम्भमा राख्नेछु मेरो साथ पहिलमा माइक सामना गर्दै।
मैले एउटा अतिरिक्त rj45 सकेट र ग्लूको माइक प्रयोग गरें र यसमा स्वीच गर्नुहोस्।
सम्भवतः त्यहाँ यो गर्न को लागी एक tidier तरीका छ तर यो काम गर्दछ।
मैले पिन १ र between बीच निरन्तरता जाँच गरें र जब "mic" कुञ्जीहरू प्रदान गरियो १kohm को प्रतिरोध हुन्छ। यो फरक पर्न सक्छ यसैले म सुझाव दिदैछु यदि तपाईंले यस्तो केबल बनाउनु भयो भने।
पिन second बाट स्विच गर्नका लागि मैले जोडेको प्रतिरोधकको साथ दोस्रो RJ45 सकेट बनाएँ। त्यसपछि एक अतिरिक्त कंडेनसर माइक थपियो र यो ठीक काम गर्दछ।
OK 73 Ok8NWO
प्रकाशित डिसेम्बर 24, 2017
क्रिसमस को लागी एक रेडियो उपहार
किन आईआरएनको लागि सबैभन्दा सुन्दर नेटवर्क रेडियोको लागि सान्तालाई सोधिरहेको छैन? को टकपड N58 शिपिंगका लागि अब उपलब्ध छ। यसको स्वामित्व प्राप्त गर्ने पहिलो हुनुहोस्!
आफ्नै गोबक्स बनाउनुहोस्
ह्याम रेडियो EMCOMM गो किट
by उच्च बिक्रेता
गत वर्ष मैले दुबै VHF / UHF र HF गो किट राखें। कार्यात्मक हुँदा, यी मध्ये कुनै पनि सक्षम वा बलियो थिएन जस्तो म अन्ततः मेरो गो किट बन्न चाहान्छु। मेरो नयाँ लक्ष्य भनेको बाक्समा सबै इन-वन स्टेशन निर्माण गर्नु थियो जुन अत्यधिक भारी वा भारी थिएन।
यदि तपाइँ इन्टरनेटको वरिपरि हेर्नुहुन्छ भने तपाईले धेरै मानिसहरूलाई र्याक केसहरूमा गो किटहरू निर्माण गर्ने देख्नुहुनेछ। मलाई जहिले पनि स्टर्डनेस र यस प्रकारको केसको मोडुलरिटी मनपर्‍यो, तर थोक होइन। धेरै बिल्डर्सले हामीलाई पूर्ण आकार unit इकाई केस गर्दछ, जुन कम्प्याक्ट हुँदैन (करीव २″ ″ वर्ग र १″ ″ अग्लो) न त लाइटवेट (१llbs भन्दा बढि)। किटमा प्रयोग गर्ने योजना गरेको उपकरणहरूको मूल्या evalu्कन गरेपछि मैले महसुस गरें कि मलाई पूर्ण गहिराइ केसको आवश्यक पर्दैन। एक उथले केस प्रयोग गर्नाले मलाई depth गहिराइको बचत हुन्छ र साथै वजन पनि कटौती गर्दछ। मैले क्याडमा धेरै सम्भावित उपकरणहरू राखें र मैले पत्ता लगाए कि यदि मैले किट निष्पक्ष हावामा राख्यो भने (कुनै एसडब्ल्यूआर मीटर वा बाह्य एन्टेना ट्युनर मात्र होइन, केवल एक बाह्य स्पिकर) म पनि case इकाई केसबाट unit एकाईमा सर्न सक्दछु र अझै सबै कुरा फिट गर्दछु। मलाई चाहियो। मैले प्रयोग गरेको unit एकाई उथला केस २२..6 ″ x १.24.२ ″ x .13 .१ ″ हो र १२.llbs तौल हो।
यस परियोजना को लागी सामान्य डिजाइन दर्शन मा सबै उपकरणहरु मा दुई सल्फ मा राखिएको थियो (एक तल र एक माथी)। CAD मा मेरो प्रयोग पछि मैले फेला पारे कि एक राम्रो संगठनात्मक लेआउट पावर आपूर्ति, बिजुली वितरण, र HF ट्रान्सीभर तल मुछिएको थियो। पावर वितरण प्रणालीको अंशको रूपमा म एक स्वचालित ब्याकअप पावर स्विच समावेश गर्न चाहान्छु। यसले पावर प्रणालीलाई निर्बाध रूपमा AC पर्खाल / जेनेरेटर पावरबाट ब्याट्री पावरमा परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ। आवश्यक नभएको खण्डमा यो राम्रो सुविधा हो किनकि यसले अपरेटिंगको बखत तपाइँको रेडियोलाई बन्द गर्नबाट रोक्दछ यदि त्यहाँ शक्तिको अवरोध छ भने (जुन सजीलै आपतकालीन र क्षेत्र अपरेशनहरूमा हुन सक्छ)।
यसले VHF / UHF ट्रान्सीभर, स्पिकर, र दुई शेल्फका लागि शीर्ष शेल्फको लागि छोडियो। कुन इकाई कुन रेडियोसँग जोडिएको छ सजिलै छुट दिनको लागि सिग्नलाइन्क्स स्पिकरबाट अलग गरिन्छ। म धेरै डिजिटल ईन्टरफेसको साथ गएको छु किनकि जब म दुबै V / U र HF सँगै कहिल्यै ट्रान्समिट गर्दिन, यो एकै समयमा दुबै अनुगमन गर्न सक्षम हुन वा अर्कोमा प्रसारण गर्दा एउटा मोनिटर गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। दुई युनिटहरू भए पनि मलाई रेडियो र सिग्नलिink्क तारि changing परिवर्तन गर्ने बारे चिन्ता लिने अनुमति दिदैन मलाई चाहिएको ब्यान्डमा अपरेट गर्न।
सिग्नलिंक्स र मेरो ल्यापटप बीचको क्याबलिंग सरल बनाउनको लागि मैले एक पावर्ड यूएसबी हबमा निर्णय गरें र युएसबी हबलाई केसको पछाडि पहुँचयोग्य बनाउने निर्णय गरें। जब यसले इन्टरफेस केबुलहरू प्लग गर्न मैले केसमा पुग्नु पर्ने हुँदैन, यसले यो धेरै सुविधाजनक बनाउँछ। पछाडि आरोहण प्लेटको थप थप सुविधाले मलाई सजिलो पहुँचको लागि V / U ट्रान्सीभरको एन्टेना जडान पनि बाहिर तान्नको लागि स्थान दियो।
मैले एक बाह्य स्पिकर मैले बसोबास गरेको लेआउटमा आधारित पर्याप्त हुने निर्णय गरे। यस लेआउटमा V / U रेडियोको स्पिकर मुनि खाली ठाउँको पर्याप्त मात्रा छ पर्याप्त ध्वनि आउटपुटको लागि अनुमति दिन। HF रेडियो, यसको शीर्ष माउन्ट स्पिकर भन्दा धेरै कम ठाउँ छ। अर्को विचार मैले गरे कि V / U मा एफएम अडियो सामान्यतया धेरै सफा हुन्छ, विशेष गरी HF मा एसएसबी अडियोको तुलनामा। यसको आधारमा मैले HF रेडियोको साथ स्पिकर प्रयोग गर्न रोजें।
केस - SKB 1SKB-R4S 4U उथले रोटो र्याक
1U, 10.5 ″ डीप शेल्फहरू
1U नकआउट प्यानल
१२V 12V कन्भर्टर मोड्युलमा
विद्युत आपूर्ति - पावरवर्क्स SS-30DV
पावर ब्याकअप स्विच / वितरण - कम घाटा PWRgate (KI0BK)
VHF / UHF ट्रान्सीवर - केनवुड टीएम- V71A
डिजिटल इन्टरफेस - टाइगरट्रोनिक्स SignaLink USB
पावरवर्क्स पावर सप्लाई गो किटहरूको लागि उत्तम छ। यो धेरै कम्प्याक्ट छ (″ ″ x ″ x ″ x २ ″), अगाडि सुविधाजनक एन्डरसन पावरपोल जडानहरू छ (पछाडि टर्मिनलहरू बाहेक), र यससँग सुरक्षित गर्न सकिन्छ। माउन्टिंग कोष्ठकहरू.
Yaesu 450D ले तपाईंको बक को लागी धेरै ब्या bang्ग प्रदान गर्दछ र तुलनात्मक कम्प्याक्ट र लाइटवेट पनि हो (9lbs)। बिल्ट-इन स्वचालित एन्टेना ट्युनरसँग फराकिलो दायरा छैन (:: १), तर म यसलाई नॉन-रेजोनन्ट एन्टेनाको साथ प्रयोग गर्ने योजना गर्दिन, त्यसैले यो पर्याप्त भन्दा बढी हुनुपर्दछ। आन्तरिक ट्युनरको प्रयोगले मलाई डिजाईनबाट बाह्य ट्यूनर हटाउन पनि अनुमति दियो, जुन मुख्य कारणहरू मध्ये एक हो जुन म unit एकाईको केसमा सबै कुरा फिट गर्न सक्षम थिए। 3० डी को प्रयोग माउन्ट गरिएको थियो २.″ ″ इस्पात कोष्ठक M4 मेशिन स्क्रू र १/1 ″ नायलन स्पेसरको साथ कोष्ठक रेडियोको घेरा बिरुद्द पड्काउनबाट रोक्नको लागि। मैले मूल रूपमा es8० डी को लागी Yaesu को मोबाइल माउन्ट प्रयोग गर्न चाहेको थिएँ, यद्यपि यसले धेरै ठाउँ लिन सक्दछ र मेरो लेआउटमा असर गर्छ। यस व्यवस्थाले रेडियोलाई १/२ को दूरीमा उठाउँदछ र शेल्फको छेउमा धेरै भेन्टिलेसन प्रदान गर्नुपर्छ।
प्रारम्भिक रूपरेखामा मैले वेस्ट माउन्टेन रेडियो प्रयोग गर्ने योजना गरेको थिए PWRgate र रिग्रनर ब्याकअप पावर स्विच र पावर वितरणको लागि। यो योजना अन्तरिक्ष प्रतिबन्ध को कारण अव्यवहारिक साबित भयो, तथापि, मैले कम घाटा PWRgate मा सही प्रतिस्थापन फेला पारे। यो अन्य ब्याकअप पावर स्विचको आधा आकारको छ र यसले output आउटपुट पावरपोल्सहरू प्रदान गर्दछ जसले एक रिग्रनर वा अन्य वितरण ब्लकको आवश्यकतालाई हटाउँछ। जबकि LLPG २ amp amps र अर्को एकाईको amp० amps को लागि रेटिंग गरिएको छ, यो अझै पनि मेरो उद्देश्यका लागि पर्याप्त हुनुपर्छ। LLPG धेरै हल्का छ र भारी शुल्क डबल स्टिक टेप को उपयोग गरेर आरोहण गरिएको थियो।
केनवुड V71A माउन्ट गरिएको थियो यो मोबाइल माउन्टिंग कोष्ठकको प्रयोग गरेर। USB हबको लागि भोल्टेज कन्भर्टर यसको माउन्ट ट्याबहरू प्रयोग गरेर शेल्फमा पेच गरियो। माथिको अन्य उपकरणहरू शेल्फ या त भारी शुल्क वेल्क्रो (सिग्नललिन्क्स, युएसबी हब) वा डबल स्टिक टेप (स्पिकर) को प्रयोग गरेर चढाइएको थियो। मैले स्पिकरको फेदमा केहि रबर स्ट्रिपहरू पनि थपेँ किनकि टेस्ट फिटिंगमा मैले पत्ता लगाएँ कि स्पिकर र HF रेडियोको बीचमा क्लीयरन्स केवल १/1 was थियो र म केस हो जब म उनीहरू बीच कुनै अपराधी सम्पर्क चाहन्न। सारियो
मेरो निर्माणबाट रिग्रनरलाई हटाउने अंशको मतलब मैले पावर वायरिंग र रेडियोहरूको केही सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्‍यो। यो एटीसी स्टाइल फ्यूजको साथ इनलाइन फ्यूज होल्डरहरूको प्रयोग गरेर गरियो। मसँग व्यवस्थापन गर्न रेडियो इन्टरफेस र USB केबुलको पनि पर्याप्त मात्रा थियो। मैले छनौट गरेका अलमहरू भेन्ट गरिएको छ जसले तिनीहरूलाई सबै स्थानमा सुरक्षित गर्न तार सम्बन्ध प्रयोगको लागि उत्तम बनाउँदछ। म पनि गो किट सकेसम्म सीधा भेला गर्न र बिच्छेदन गर्न चाहान्छु। यस लक्ष्यको एक अंशले व्यक्तिगत अलमाराहरूमा तारहरू बाँध्ने कार्य सीमित गर्दै थियो। यसको मतलब यो छ कि यदि म एउटा शेल्फ हटाउन चाहान्छु, मैले केवल मुट्ठी भर केबुलहरू बिच्छेदन गर्नुपर्दछ जुन दुई सिल्फ (दुई पावर, एक स्पिकर अडियो, एक SignaLink) को बीचमा जडान गरिएको छ, तब शेल्फलाई अनक्रुभ गरी बाहिर तान्नुहोस्। तार सम्बन्धको कुनै कटौती आवश्यक छैन।
म वास्तवमै गो किट भित्र रेडियो माइक्रोफोन स्टो गर्न सक्षम हुन चाहान्थें र मैले भेटाइन कि V / U रेडियोको माइक HF रेडियोको माउन्टिंग ब्रैकेट मध्ये एकमा लैजान सक्छ र माइक्रोफोनको केबल पावर आपूर्ति र HF बीच राम्रोसँग फिट हुनेछ रेडियो यो विशेष गरी सुविधाजनक छ किनकि माइक्रोफोन ज्याक स्थितिमा छ कि यो एक पीडा को एक बिट विच्छेदन गर्दछ।
HF रेडियोको माइक भेलक्रो र अगाडि केसको बिर्कोको भित्री पट्टि प्रयोग गरी राखिएको छ। Idकसमा पर्याप्त गहिराइ छ कि माइकले बिजुली आपूर्तिको अगाडि सम्पर्क नगरी फिट गर्न सक्दछ। पावर सप्लाई एसी पावर कर्ड HF माइकको समान पट्टा विधि प्रयोग गरी राखिएको छ, यो पछाडि केसको बिर्कोमा बाहेक।
सानो र्याक केस प्रयोग गर्ने लक्ष्यको अंश तौल र थोकमा कटौती गर्नु थियो। मैले जानेको किट निर्माण गर्न सक्छु र weightllbs को वजन घटाउन सक्छु भनेर अनुमान लगाएको छु। अन्तमा किटको वजन .35०.l एलबीएस हुन्छ। मलाई लाग्छ मैले यसबाट लिएको पाठ त्यो तार र माउन्टिंग हार्डवेयरले तपाईंलाई महसुस गर्नुभन्दा बढी वजनमा थप्दछ।
किट सेटअप गर्न धेरै सीधा छ। लिडहरू बन्द भए पछि म केवल माइक्रोफोन र पावर कर्डलाई अनस्ट्रेप गर्दछु। त्यसो भए म या त AC पावर वा ब्याट्रीमा प्लग गर्न सक्छु, मेरो एन्टेना काट्न, USB मेरो ल्यापटपमा जडान गर्न, र म हावामा छु। म यस किटको सानो थोकको साथ धेरै खुसी छु; ढक्कन हटाइएमा केस मात्र १२ डिग्री हुन्छ र सानो टेबुलमा सजीलै फिट हुन्छ। किट मेरो घर स्टेशनमा पूर्ण रूपमा एकीकृत गर्नको लागि पर्याप्त सानो छ, जुन फिल्ड अपरेसनको लागि सबै कुरा पूर्ण रूपमा कार्यक्षम छ भनि सुनिश्चित गर्न यो धेरै सुविधाजनक बनाउँछ। म कसरी यो किट सकियो भन्नेमा धेरै खुशी छु र मैले मार्गमा धेरै कुरा सकिनँ, विशेष गरी केस लेआउट र पार्ट्स फिटमेन्टको बारेमा।
अपडेट - माइक्रोफोन कनेक्टर (फेब्रुअरी २०१))
केहि हप्ताको लागि मेरो Go Kit प्रयोग गरिसकेपछि मैले महसुस गरे कि केनवुड V71 को माइक्रोफोन कनेक्टर सबै भन्दा राम्रो स्थानमा थिएन। यो रेडियोको तर्फ हो र जब माइक प्रयोग भईरहेको छ यसले घुमाउँछ र अन्यथा माइक्रोफोनको कनेक्टरलाई जोड दिन्छ। यो अवस्था सुधार गर्न मैले गो किटको अगाडि रेडियोको माइक जडान विस्तार गर्ने निर्णय गरें। मैले यो १ फुट ईथरनेट प्याच केबल रaप्रयोग गरेर पूरा गरें RJ45 इनलाइन कपलर। यो कपलर भारी शुल्क डबल स्टिक टेपको साथ विद्युत आपूर्तिको शीर्षमा माउन्ट गरिएको थियो। यो नयाँ व्यवस्थाले माइक्रोफोन जडानलाई धेरै पहुँचयोग्य बनाउँदछ र धेरै जोडदारहरूमा तनाव कम गर्दछ।
अद्यावधिक गर्नुहोस् - नयाँ पावर बक्सको साथ एकीकरण (नोभेम्बर २०१))
मेरो नयाँ निर्माण को भाग पावर बक्स मेरो गो किटको लागि पावर सर्किटरी परिमार्जन शामिल छ। किनभने ब्याट्री स्विचिंग कम्पोनेन्टहरू अब बोर्डको बाहिर छन् मलाई अब कम घाटा PWRgate को आवश्यकता पर्दैन। यसको ठाउँमा मैले स्थापित गरें पावरवर्क्स PD-4 वितरण ब्लक। म पनि एक प्रयोग पावरपोल आरोहण क्ल्याम्प र ABS प्लास्टिक को एक टुक्रा मेरो बिजली आपूर्ति को उत्पादन को लागी एक माउन्ट बनाउन। यसले मलाई कनेक्शनको दुई ठोस पोइन्टहरू दिन्छ जहाँबाट म मेरो पावर बक्समा तार गर्न सक्छु। वा यदि म विशेष रूपमा विद्युत आपूर्ति बन्द गर्दैछु भने म स्वचालित अपरेसनको लागि एक साधारण जम्पर प्रयोग गर्न सक्दछु।